क्रिकेट Archives - MeroKhelkud
२०७९ जेष्ठ ९ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर59LeaveaComment on कृतिका मरासिनी बनिन् १९ वर्षमुनिको महिला क्रिकेटको कप्तानमा
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले १९ वर्षमुनिको नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टीमको कप्तानमा कृतिका मरासिनीलाई छनोट गरेको छ । सोमबार क्यानले सामाजिक सञ्जालमार्फत् १९ वर्षमुनिको नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टीमको कप्तानमा कृतिका मरासिनीलाई छनोट गरेको जानकारी गराएको हो । केही अघिपनि क्यानले राष्ट्रिय महिला टीममा परिवर्तन गरेको थियो । उसले महिला टीमकी उपकप्तानलाई हटाएको […]
कार दुर्घटनामा अस्ट्रेलियाका पूर्व क्रिकेटर एन्ड्रयु साइमण्ड्सको मृत्यु
२०७९ जेष्ठ १ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर157LeaveaComment on कार दुर्घटनामा अस्ट्रेलियाका पूर्व क्रिकेटर एन्ड्रयु साइमण्ड्सको मृत्यु
काठमाडौँ । अष्ट्रेलियाका पूर्व अलराउन्डर तथा दिग्गज क्रिकेटर एन्ड्रयु साइमण्ड्सको दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ । शनिबार राति अस्ट्रेलियाको क्वीन्सल्याण्डमा कार दुर्घटनामा परी उनको मृत्यु भएको हो । क्वीन्सल्याण्ड प्रहरीले शहरबाट करिब ५० किलोमिटर पश्चिममा रहेको हर्भे रेन्जमा तीव्र गतिमा रहेको कार सडकमा पल्टिएको बताएको छ । ४६ बर्षिय एन्ड्रयू साइमन्ड्स यो कारमा थिए । प्रहरीले […]
२०७९ बैशाख २९ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर88LeaveaComment on युगाण्डाविरुद्धको टी–ट्वान्टी क्रिकेट सिरिजका लागि राष्ट्रिय महिला टोली घोषणा
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले युगाण्डाविरुद्धको पाँच खेलको टी–ट्वान्टी सिरिज खेलका लागि राष्ट्रिय महिला टोलीको घोषणा गरेको छ । बुधबार क्यानले एक सूचना जारी गर्दै २० खेलाडी सम्मिलित टोली घोषणा गरेको हो । जेठ २ गतेदेखि ७ गतेसम्म त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुन लागेको सिरिजका लागि रुबिना क्षेत्रीको कप्तानीमा टोली घोषणा गरिएको हो । टोलीमा […]
पहिलो एकदिवसीयमा जिम्बावे ‘ए’ सँग नेपाल ३ विकेटले पराजित
२०७९ बैशाख २३ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर149LeaveaComment on पहिलो एकदिवसीयमा जिम्बावे ‘ए’ सँग नेपाल ३ विकेटले पराजित
काठमाडौं । जिम्बोवे ‘ए’ विरुद्धको तीन खेलको एकदिवसीय सिरिजअन्तर्गत पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपाल ३ विकेटले पराजित भएको छ । कीर्तिपुर मैदानमा शुक्रबार भएको खेलमा नेपालले दिएको १३७ रनको लक्ष्य जिम्बावे ‘ए’ ले २६ ओभरमा ७ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । जिम्बावेका लागि ओपनर इन्नोसेन्ट काईयाले अविजित रहँदै सर्वाधिक ४८ रन बनाए । उनले चार […]
टी-२० र वनडे वरियतामा नेपाल एक स्थान खस्कियो
२०७९ बैशाख २२ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर203LeaveaComment on टी-२० र वनडे वरियतामा नेपाल एक स्थान खस्कियो
काठमाडौं । एकदिवशीय र टी-२० अन्तर्राष्ट्रियको वरियताक्रममा नेपाल एक स्थान खस्किएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसिसी) ले बुधबार निकालेको ताजा वरियताक्रममा नेपाल टी-२० अन्तर्राष्ट्रियमा १३ औँ स्थानमा रहेको छ । यसअघि १२ औँ स्थानमा थियो । यस्तै एकदिवशीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा नेपाल १९ औँ स्थानमा रहेको छ। यसअघि १८ औँ स्थानमा रहेको थियो ।
आज दिउँसो एक बजे नेपाल र जिम्बावे ‘ए’ भिड्दै
२०७९ बैशाख १८ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर184LeaveaComment on आज दिउँसो एक बजे नेपाल र जिम्बावे ‘ए’ भिड्दै
काठमाडौं। टी–२० शृङ्खलाको पहिलो खेलमा आज नेपाल र पाहुना टोली जिम्बाब्वे ‘ए’ टोली खेल्दैछन्। खेल कीर्तिपुर मैदानमा दिउँसो एक बजे शुरु हुनेछ। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लिग–२ अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय शृङ्खलाको तयारीमा नेपालले जिम्बाब्वे ‘ए’सँग अभ्यास खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले घरेलु मैदानमा जिम्बाब्वे ‘ए’ सँग तीन खेलको टी–२० र ती […]
जिम्बावे ए विरुद्ध हुने एकदिवशीय शृंखलाका लागि नेपाली टोलीको घोषणा, को–को परे ?
२०७९ बैशाख १६ गते २०७९ बैशाख १६ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर420LeaveaComment on जिम्बावे ए विरुद्ध हुने एकदिवशीय शृंखलाका लागि नेपाली टोलीको घोषणा, को–को परे ?
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले जिम्बावेसँगको एकदिवसीय क्रिकेट सिरिजका लागि १६ खेलाडी छनोट गरेको छ । शनिबारदेखि कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुने तीन एकदिवसीय क्रिकेट खेलका लागि क्यानले सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा १६ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो । टीममा कप्तान लामिछानेसँगै आशिफ शेख, देव खनाल, दिपेन्द्रसिंह ऐरी, रोहित पौडेल, आरिफ शेख, विनोद भण्डारी, करण […]
त्रिकोणात्मक शिरिजमा नेपालको पहिलो भेट ओमानसँग, कहिले र कहाँ ?
२०७९ बैशाख १४ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर314LeaveaComment on त्रिकोणात्मक शिरिजमा नेपालको पहिलो भेट ओमानसँग, कहिले र कहाँ ?
काठमाडौं । नेपालले जुन दोस्रो सातादेखि अमेरिकामा सुरु हुने आईसिसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजमा पहिलो खेल ओमानसँग खेल्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आइसिसीले नेपाल, अमेरिका र ओमानबीचको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो । नेपालले पहिलो खेल वैशाख जेठ २६ मा ओमानसँग खेल्दै सुरुवात गर्नेछ । लिग–२ मा ओमान […]
कोलकाता नाइट राइडर्सलाई हराउँदै आईपीएलको शीर्ष स्थानमा उक्लियो गुजरात
२०७९ बैशाख १० गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर385LeaveaComment on कोलकाता नाइट राइडर्सलाई हराउँदै आईपीएलको शीर्ष स्थानमा उक्लियो गुजरात
काठमाडौं । कोलकाता नाइट राइडर्सलाई ८ रनले हराउँदै नबप्रवेशी गुजरात टाइटन्स इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । डीवाई पाट्ली स्टेडियम मुम्बईमा गुजरातले दिएको १ सय ५७ रनको लक्ष्य पछ्याएको कोलकाता निर्धारित ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १ सय ४८ रनमा समेटिएपछि गुजरातले ८ रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको हो । गुजरातका लागि […]
बुढेस्कालमा धोनी चम्किदा मुम्बईको ७ खेलमा ७ हार
२०७९ बैशाख ९ गते मेरो खेलकुद रिपोर्टर310LeaveaComment on बुढेस्कालमा धोनी चम्किदा मुम्बईको ७ खेलमा ७ हार
काठमाडौं, वैशाख ९ : भारतमा जारी १५ औं संस्करणको इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) मा गत विजेता चेन्नई सुपर किंग्स (सिएसके) ले दोस्रो जित निकालेको छ । गएराति सम्पन्न खेलमा मुम्बई इण्डियन्सलाई तीन विकेटले हराउँदै चेन्नईले दोस्रो जित निकालेको हो । आफ्नो सातौँ खेलमा मुम्बईले दिएको १५६ रनको लक्ष्य चेन्नईले निर्धारित २० ओभरमा सात विकेट गुमाएर […]
प्रोफेसनल मुवाथाई फाइटमा नेपालका गुणराजले म्यानमारका खेलाडीलाई ढलाए